Caqabadaha hor taagan shirka wada tashiga qaran | KEYDMEDIA ONLINE
Caqabadaha hor taagan shirka wada tashiga qaran
Waxaa sii badanadaya caqabadaha ku hor gudban qabsoomidda shirka wada tashiga ee dhawaan la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho, kaas oo ay soo qaban qaabiyeen wakiillada Beesha Caalamka ee Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa hore u fashilmay Saddex shir oo Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo uu iclaamiyay, isuguna yeeray Madaxda Maamul goboleeyada iyo Gobolka Banaadir, taas oo sababtay in wakiillada Beesha Caalamka ay dusha saartaan Masuuliyadda qabashada shir loo dhan yahay.
Qaar ka mid ah Madaxda Maamul goboleedyada ayaa soo jeediyay in Shirka wada tashiga lagu qabto Muqdisho, Farmaaajo uusan iclaamin, amnigiisa la sugo, isla markaana la helo cid damaad qaadda fulinta heshiiskii ka soo baxa shirka, sida muuqada intaasba waxaa dusha saaratay beesha caalamka oo xitaa bixineysa qarashka ku baxaya wufuudda ka qeyb galeysa shirka.
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo oo u muuqda in uusan diyaar u ahayn xal raaga oo laga gaaro, arrimaha doorashooyinka ayaa cadaadis saaraya maamullada nidaamkiisa taabacsan ee GM, H/SH iyo KG, si uu shirku u fashilmo.
Waxaa Muqdisho yimid Madaxweynayaasha Puntaland iyo Jubbaland, si ay uga qeyb galaan shirka, waxaase lama huraan noqotay in shirka ka hor la dhameeyo madmadoow u dhaxeeya qaar ka mid ah Madaxda Maamullada.
Madaxweynaha Galmudug Qoor-qoor ayaa safar deg deg ah ku yimid Muqdisho Talaadadii, waxaana sida la xaqiijiyay lagu qanciyay inuu ka qeyb galo shirka, oo uu markii hore ka biya-diid-sanaa.
Siyaasiyiin u badan Xildhibaanno ayaa sidoo kale isku howlay in ka hor shirka la dhameeyo madmadowga ka dhex jira Qoor-qoor iyo Madaxweynayaasha Puntaland iyo Jubbaland, kaas oo la qosheeyay in ay maanta kulan yeeshaan, hayeeshee aan qabsoomin.
MW, Qoor-qoor, wuxuu kulan la qaatay Golaha Midowga Murashixiinta iyo Madaxweynaha HirShabeelle, waxaana lagu heshiiyay in Madaxweynayaashu qaadaan cabashada GMM, oo ay shirka wada tashiga geeyaan ama ay kala shaqeeyaan in Goluhu uu xubno ku yeesho shirka, taas oo ay sheegeen in ay kula laabanayaan Farmaajo.
Sidoo kale Madaxweynayasha QM, iyo H/SH, iyo GMM, waxa ay ku heshiiyeen in Qoor-qoor iyo Guud-lawe cadaadiska laga yareeyo iyaguna dhageystaan hadallada Murashixiinta.
Waxaa xalay la isku af-gartay in dib loo dhigo kulanka Guddiga Farsmada ee Wasirada ka kooban, hayeeshee saaka ayuu shirkoodii furmay ayadoo ay ka maqan yihiin maamullada Puntland iyo Jubbaland.
Waxaa maanta Muqdisho looga dhawaaqay, Gole cusub oo la magac baxay Madasha Badbaada Qaran, waxaana ku mideysan Puntland, iyo Jubbaland, Midawga Musharixiinta iyo Midawga Siyaasiyiinta Somaliland.
Madaxweynaha Koofur Galbeed oo loo tix galiyo inuu yahay qofka ugu dhow Farmaajo Madaxda Maamul Goboleedyada ayaa ka maqan dalka, wakiilada beesha caalamka ayaana cadaadis ku saaraya inu dalka ku soo labto ilaa Sabtiga soo socda.